तिथि मेरो पत्रु » के महिला साँच्चै चाहनुहुन्छ?
द्वारा दाऊदले छायाँ
के महिला साँच्चै चाहनुहुन्छ?
पछिल्लो पटक अद्यावधिक गरिएको: Mar. 23 2020 |5मिनेट पढ्न
त्यो के चाहन्छ तपाईं एक महिला सोध्न भने, उनले एक मानिस के चाहन्छ वर्णन गर्ने प्रयास जवाफ हुनेछ. र त्यो सामान्यतया वर्णन कि समस्या छ. त्यो पनि त्यो साँच्चै आवश्यक के छ वर्णन गर्न सुरु सक्छ.
जब तपाईं ध्यान दिएर सम्बन्ध महिला पालन, तपाईंले केही सम्बन्ध थप पूरा र अरूलाई भन्दा सफल छन् भन्ने पत्ता लगाउन. सफल सम्बन्ध लागि, महिला त्यो आवश्यक सबै कुराहरू प्राप्त छ. यस सम्बन्धमा कि पूरा छैन, महिला आवश्यकता को एक वा बढी भेट भइरहेको छैन.
महत्वपूर्ण केही छुटेको छ जब त्यो जान्नुहुन्छ
जब तपाईं ध्यान दिएर आफ्नो वैवाहिक बाहिर गए जो महिलाहरु पालन, तपाईं तिनीहरूले आफ्नो वैवाहिक हराइरहेको थिए जो कि प्राप्त छन् भनेर पत्ता लगाउन. उदाहरणका लागि, सेक्स बोरिंग छ भने, त्यो एउटा रोमाञ्चक प्रेमी प्राप्त हुनेछ. यदि विवाहमा सेक्स स्वीकार्य छ, तर उनले भइरहेको आदर छैन उपचार छ कि महसुस, त्यो आदर उनको व्यवहार गर्ने मानिस पाउनुहुनेछ. जब महिलाहरु आफ्नो वैवाहिक बाहिर जाने, तिनीहरूले एक वा बढि आवश्यकता पूरा को छ देख रहे. केही महिला लागि, यो क्रममा दुई फरक मानिसहरू लिन्छ भने सबै उनको आवश्यकता पूरा प्राप्त गर्न, त्यो यो के छौँ.
चाखलाग्दो, सबैभन्दा अवस्थामा, महिला आफ्नो वैवाहिक बाहिर जान खोज्नु भएन. तिनीहरूले मात्र तिनीहरूले दु: खी थिए भनेर थाह थियो. तिनीहरूले अन्य मानिसहरूबाट अग्रिम गर्न susceptible भए र त्यसपछि यो संग जान छनौट.
सबै भन्दा महिलाहरु को लागि, त्यो प्राप्त छ भने सबै उनको आवश्यकता भेट, त्यो पूर्ण मानिस छोडेर उनको पूरा गर्न सक्ने मानिस खोज्न हुनेछ. किनभने त्यो सबै उनको आवश्यकता भेट प्राप्त होइन तर त्यो यो हो कि थाहा छैन, त्यो मात्र त्यो सम्बन्ध बारे के कुरा मन छैन थाह.
महिला थाहा नहुन सक्छ, र ती सबै भन्दा यसलाई पक्कै पनि स्पस्ट बोल्नु् सक्दैन, तर महिला पूरा गर्न चार कुराहरू आवश्यक.
त्यहाँ चार महत्वपूर्ण कुराहरू एक नारी आवश्यकताहरू हुनुहुन्छ
पहिलो, उनले छ कि अद्वितीय व्यक्तिगत लागि सराहना महसुस गर्न आवश्यक छ. त्यो विशेष महसुस गर्न आवश्यक छ, अन्य कुनै पनि महिला विपरीत. र त्यो उनको मानिस उनको प्रयासहरूलाई मा उनको समर्थन जान्न आवश्यक छ.
दोस्रो, त्यो भनेर गहिरो घनिष्ठ भावनात्मक जडान महसुस गर्न आवश्यक छ. त्यो मानिस संग भावनात्मक सम्बन्धले गर्न आवश्यक. त्यो मात्र उहाँलाई साझेदारी जडान छ.
तेस्रो, त्यो एक महिला जस्तै महसुस गर्न आवश्यक छ. त्यो सुन्दर महसुस गर्न आवश्यक छ, सेक्सी, र स्त्री. त्यो एक महिला हुनुको आउँछ कि सबै ती कुराहरू रमाइलो गर्न आवश्यक.
र अन्तमा, त्यो तातो भावुक सेक्स आवश्यक. त्यो आकर्षित गर्न आवश्यक, फस्यो, teased, र सन्तुष्ट, माथि र फेरि. त्यो नयाँ कुरा अनुभव गर्न आवश्यक, नयाँ तरिकामा, कल्पनामा र भूमिका सहित. यो उनको जीवित महसुस.
उनले संग सबै कुरा छ कि एक मानिस संग हुँदा एक महिला सबैभन्दा पूरा हुन्छ, उनले बारेमा बेतहाशा पागल हो भनेर मानिस संग हुँदा. तर शायद हुन्छ. सामान्यतया, एक वा बढी कुराहरू हराइरहेका छन्.
एक महिलाको जीवनमा विभिन्न मानिसहरूको उदाहरण
का विभिन्न मानिसहरू एक महिला उनको जीवनमा साथ भएको छ हेरौं. विभिन्न मानिसहरूले आवश्यकता केही भेट, तर ती सबै छैन.
उदाहरणका लागि, का सबै प्रसिद्ध क्लासिक खराब केटा गरौं. खराब केटा उनको रोमाञ्चक सेक्स दिन्छ. अनि उहाँले धेरै पुरुष किनभने, उनको सेक्सी महसुस. तर उहाँले तिनलाई मा Cheats गर्ने आत्म अवशोषित Jerk छ. त्यो महसुस सराहना छैन, र त्यो शायद कुनै पनि भावनात्मक जडान महसुस गर्न असमर्थ छ. त्यो अक्सर सेक्स त राम्रो छ र त्यो त धेरै यौन महसुस किनभने उहाँलाई आदी पाइहाल्छन्. तिनले उसलाई रत्तीएको गर्न व्यर्थमा प्रयास गर्नेछ, तर यो निरर्थक छ. एक भावनात्मक विभाजन मा, त्यो अन्ततः राम्रो लागि उहाँलाई छोडेर. कम से कम उच्च आत्म सम्मान महिला अन्तमा राम्रो लागि उहाँलाई छोडेर.
यो राम्रो केटा
त्यसपछि क्लासिक wimp राम्रो मान्छे त्यहाँ. उहाँले उनको सराहना महसुस, र उहाँले एउटा भावनात्मक सम्बन्ध स्थापना गर्न सक्षम छ उनको. दुर्भाग्यवश हुनत, उहाँले बोरिंग छ, वा उहाँले पुरुष होइन, त्यसैले त्यो सेक्सी महसुस गर्दैन र यौनबारे चालू महसुस गर्दैन. तिनले उसलाई विवाह गर्न चाहन्छौं, किनभने उहाँले एक परिवार को लागि सिद्ध हुन चाहन्छु, तर केही कारणले त्यो संलग्नता delaying रहन्छ. उनको एक यौन प्राणी जस्तै महसुस बनाउन छैन किनभने यो हो.
यो रोगहरु अनुपलब्ध केटा
त्यो आदर्श सम्बन्ध प्राप्त सक्छ सबैभन्दा नजिकको को भावनात्मक उपलब्ध मान्छे हो. उहाँले एक wimp छैन, र उहाँले एक Jerk छ. उहाँले पुरुष हुन र उनको राम्रो सेक्स दिन सक्छ. उहाँले एक सज्जन हुन र उनको धेरै सराहना महसुस बनाउन सक्छ. तर त्यहाँ एउटा महत्त्वपूर्ण कुरा हराएको छ. उहाँले भावनात्मक उपलब्ध छैन. तिनले उसलाई भावनात्मक जडान महसुस कहिल्यै. यो भन्दा ठूलो उजुरी महिला छन् शायद. त्यो सबै पक्षहरूमा मा आदर्श मान्छे फेला परेन, तर धिक्कार छ, उहाँले भावनात्मक उपलब्ध छैन. त्यो भन्दा बढी खोज्छ र उसलाई उनको सम्म खोल्न प्राप्त गर्न, तर यो कहिल्यै हुन्छ. महिला भावनात्मक जीव हो, र उनि यसको आवश्यकता, त्यसैले त्यो अन्ततः छोड्दा.
यो समलैंगिक मित्र
त्यहाँ उनको जीवनमा अरू मानिसहरूको हो. त्यहाँ उनको समलिङ्गी साथी. उनको सेक्सी महसुस र उहाँ उनको सराहना महसुस किनभने त्यो उसलाई बाहिर झुन्डिएको loves. तिनले उसलाई साधारण धेरै छ, तर धिक्कार छ, उहाँले समलिङ्गी छ, र यसरी एक विकल्प.
यो रहस्यमय प्रेमी
र त्यसपछि त्यहाँ सामयिक रहस्यमय प्रेमी छ. धेरै कारणहरूले त्यो कहिल्यै पनि उहाँलाई गम्भीर केहि को लागि विचार चाहन्छु, तर बेइमान, सेक्स राम्रो छ. हरेक केही महिना एक पटक, जब त्यो कुरा उनको लागि कसरी जाँदैछन् संग नरमाइलो छ, त्यो तिनलाई कल र एउटा कुरा को लागि माथि जाने छौँ, र एउटा कुरा मात्र. सेक्स को लागि. अनि त्यसपछि उनले चाँडै आदर्श मानिस पाउनुहुनेछ आशा छोड्छ.
यो विवाहित मानिस
र अन्तमा, अन्तिम उदाहरणको रूपमा, त्यहाँ विवाहित मानिसको. केवल कम आत्म सम्मान महिलाहरु आफूलाई एक Mistress बन्न अनुमति, वा अर्को शब्दमा, त्यो हुन सक्छ के छैन चाहने एक महिला. उहाँले उनको रोमाञ्चक सेक्स दिन्छ, उनको सेक्सी महसुस, तिनीहरूले गहिरो भावनात्मक जडान साझेदारी. तर उहाँले आफ्नो पत्नी छोड्न हुनेछ. त्यसैले त्यो विशेष महसुस गर्दैन. र त्यो कम आत्म सम्मान छ किनभने, उनको छोड्न लागि यो धेरै गाह्रो छ.
तर उच्च आत्म सम्मान महिला पछि प्राप्त गरौं.
केवल उनले आवश्यकता त्यो सबै सक्थे भने
त्यसैले, ती उनको जीवनमा मानिसहरूको उदाहरण थिए. तपाईं देख्न सक्छौं, उनको आवश्यकता को एक वा बढी प्रत्येक उदाहरण मा भेट भइरहेको छैन. तर त्यो सजिलै उनको आवश्यकता सबै भेट मानिसलाई भेट्न सक्छ भने कल्पना. उनको महसुस मानिस सराहना. उनको एउटा गहिरो शक्तिशाली भावनात्मक जडान evoked मानिस. उनको स्त्री र womanly र सेक्सी महसुस मानिस. उनको तातो भावुक सेक्स दिने मानिस. अब त्यो भयानक हुनेछ.
त्यो Masterful प्रेमी छ. उहाँले बलियो अझै कोमल छ. इमानदार अझै कुशल. पुरुष अहिलेसम्म भावनात्मक. निर्णायक अझै लचिलो. लक्ष्य अझै स्वभाविक उन्मुख. अहिलेसम्म दिने संचालित. प्रमुख अझै विचारशील. र उनको जंगली चिल्ला orgasms दिन्छ.
यो महिला बारे सपना कुरा प्रकारको छ.
यो अन्तिम लागि मेरो अनुसन्धान ध्यान भएको 15 वर्ष, र मेरो पुस्तक मा दस्तावेज गरिएको छ, “दाऊदले छायाँ गरेको Masterful प्रेमी म्यानुअल।” तपाईं किताबको बारेमा थप पढ्न सक्नुहुन्छ मेरो वेबसाइटमा.
महिला अविश्वसनीय खुशी दिन,